Masiixa oo ah wankayaga Kormaridda, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Sababtoo ah Wankayaga Kormariddayada ayaa nala gowracay: Masiix. (1 Korintos 5,7: XNUMX).
Ma dooneynno inaan iska indhatirno dhacdo weyn oo ka dhacday Masar ku dhawaad ​​4000 sano kahor markii Ilaah ka xoreeyay Israa'iil addoonsiga. Toban belaayo, oo lagu qeexay Baxniintii, ayaa lagama maarmaan u ahaa in la ruxruxo Fircoon caasinimadiisa, kibirkiisa, iyo caasinnimada Ilaah.
Iiddii Kormaridda waxay ahayd belaayadii ugu dambaysay uguna dambaysay, waayo, curadyadii oo dhan, dad iyo duunyaba, waa la dilay markii Rabbigu guday. Ilaah wuxuu badbaadiyey reer binu Israa'iil addeeci jiray markii lagu amro inay gawracaan gawraca maalinta 14aad ee bisha Aabiib iyo inuu dhiigga ku faafo albaabka iyo albaabka albaabka. (Fiiri Baxniintii 2). Aayadda 12aad waxaa lagu magacaabaa Kormaridda Rabbiga.
Qaar badan baa iloobi karaya Iiddii Kormaridda ee Axdiga Hore, laakiin Ilaah wuxuu dadkiisa xusuusinayaa in ciiskeenna Kormaridda loo diyaariyay sidii wanka Wanka ee Ilaah ah inuu qaado dembiyada dunida. (Yooxanaa 1,29:XNUMX). Wuxuu ku dhintay iskutallaabta ka dib markii jirkiisa uu jeexjeexay oo jirdilay fallaadho, warankiisana uu garaacay dhinaciisa, dhiigguna wuu daatay. Waxaas oo dhan ayuu u adkaystay, sida la saadaaliyay.
Wuxuu nooga tagay tusaale. Iiddii Kormariddiisii ​​ugu dambeysay, oo aan hadda u naqaanno karaamada, ayuu xertiisii ​​baray inay midba midka kale cagaha u maydho tusaale ahaan is-hoosaysiinta. Iyada oo laga xasuusto dhimashadiisa, wuxuu siiyey kibis iyo khamri yar si ay calaamad ahaan ula wadaagaan cunida hilibkiisa iyo cabidda dhiiggiisa (1 Korintos 11,23: 26-6,53, Yooxanaa 59: 13,14-17 iyo Yooxanaa 9,14: 1- 1,7). Markay reer binu Israa'iil ee Masar rinjiyeen dhiigga wanka idaha iyo albaabka albaabka, waxay ahayd muujinta dhiigga Ciise ee Axdiga Cusub oo lagu saydhay albaabbada qalbiyadeenna si damiirkayaga loo caddeeyo oo dembiyadeenna oo dhan loo nadiifiyo Dhiigiisa waa la daahirin doonaa (Cibraaniyada 2000:XNUMX iyo XNUMX Yooxanaa XNUMX: XNUMX). Mushahaarada dembigu waa dhimashada, laakiin hadiyadda qaaliga ah ee Ilaah waa nolosha weligeed ah ee laga helo Rabbigeenna Ciise Masiix. Karaamada dhexdeeda, waxaan ka fikirnaa geerida badbaadiyaheena, si aynaan u ilaawin geerida xanuunka iyo ceebta leh ee iskutalaabta ku dhacday XNUMX sano ka hor dembiyadeena dartood.
Wiilkii uu jeclaa, oo Ilaah Aabbaha u soo diray sidii Wanka Ilaah inuu ku bixiyo madaxfurashadayada, ayaa ka mid ah hadiyadaha ugu weyn ee dadka loo siiyo. Uma qalmin nimcadan, laakiin Ilaah wuxuu ku doortay nimcadiisa inuu ina siiyo nolosha weligeed ah isagoo uu jecel yahay Wiilkiisa uu jecel yahay Ciise Masiix. Kormariddeenna Ciise Masiix wuxuu ku dhintay isagoo doonaya inuu na badbaadiyo. Waxaan ka akhrinaa Cibraaniyada 12,1: 2-XNUMX, "Sababtoo ah annaguna, maadaama aannu haysanno markhaati weyn oo caynkan ah oo hareerahayaga ah, aan iska fogeynno wax kasta oo nagu ashtakeeya iyo dembiyada mar walba nagu dhejiya, oo aan u dulqaadan doonno dulqaad. Halgankii innaga inoo ahaa oo aannu fiirino Ciise, kan bilowga iyo caqiiddada iimaanka leh, in kasta oo uu farxad heli karo, wuu adkaystay iskutallaabta, wuuna quudhsaday ceebta, wuxuuna fadhiistay midigta carshiga Ilaah. "